musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Atkins Kroll Anobatana neHafa Adai Pledge Chirongwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Zimbabwe Breaking News • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Guam Hafafa Adai Chibvumirano
Guam Visitors Bureau (GVB) yazivisa kuti Atkins Kroll Inc. yatora Håfa Adai Pledge (HAP) masikati ano kuAK Showroom muTamuning.
Chibvumirano chinosimbisa vimbiso yeGVB yekuchengetedza nhaka yayo iri mupenyu musangano rese.
AK Showroom ichave chikamu chakakosha chekubatsira vagari vepazvitsuwa uye vashanyi kuwana kwavanofanira kuenda.
Mhemberero yekusaina yakaratidza kuzvipira kuchengetedza mutauro weGuam, tsika, uye tsika.
“Sekambani yekare yeGuam, takazvipira zvikuru mukuchengetedza mutauro wechinyakare, tsika nemagariro. Kutora mhiko iyi kunosimbisa vimbiso yedu yekuchengetedza nhaka yedu iri mupenyu musangano redu, akadaro AK Mutungamiri Wendi Hering. “Sezvo chitsuwa chedu chakanangana nekugadzirisa hupfumi, tinoda kuti nharaunda yedu izive kuti tichava pano nhanho dzese dzenzira sezvatakaita makore gumi nemanomwe apfuura. AK ari pano kuGuam uye kuno kweupenyu hwese, "akawedzera Herring.
"Tinofara kugamuchira AK muHåfa Adai Pledge familia," akadaro GVB Director we Tourism Tourism Nico Fujikawa. "Ivo chikamu chakakosha chekubatsira vagari vepachitsuwa chedu uye vashanyi kusvika kwavanofanirwa kuenda. Ichi chirongwa chevimbiso chinopfuura kungo kwazisa Håfa Adai. Iri kusimbisa yakakosha tsika yezvinoita Guam akasiyana nemiitiro yenyu yezuva nezuva. ”
Mhemberero yekusaina yakapera nezvikafu zvishoma kune avo vakapinda.
Atkins Kroll, inchcape kambani, ndiye anotungamira wekuparadzira mota kuGuam, kuchamhembe Mariana Islands neMicronesia ichigonesa kupa huwandu hwakazara hwezvigadzirwa nemasevhisi mudunhu. Atkins Kroll ikambani yekare yeGuam yakavambwa muna 1914 uye inomiririra Toyota, Lexus, BMW, Chevrolet, Toyota Rent A Car, ACE Rent a Car, uye AC Delco mabhendi.
Iyo Håfa Adai Pledge ndiro dombo repakona reiyo Guam Visitors Bureau yenzvimbo yemunharaunda yekutengesa chiratidzo. Chirongwa cheHåfa Adai Pledge chakakura zvakadzikama muhuwandu hwevatori vechikamu pamwe nezviri muzvipikirwa zvega kubva zvakatanga muna 2009. Vanopfuura mabhizimusi akazvimiririra vanopfuura mazana mana nemakumi mana, vamiriri vehurumende, vasina purofiti, masangano, uye vana vechikoro vemuno vatora rubatso, vachimirira vanopfuura vanhu zviuru makumi mana nezvina munharaunda nekune dzimwe nyika.